Abavelisi bePhepha kunye nabaXhasi - iFektri yePhepha laseChina
Iphepha leCrafti yeCrafti elahliweyo
Ukutya okukhawulezayo kuyathandwa kwihlabathi liphela, kwaye phakathi kokutya okukhawulezayo, iifriji zaseFrance zezona mveliso zisetyenzisiweyo njengoko ziyinto yokutya emnandi kunye namanzi. Ukugcina ubumnandi babo kunye nokwandisa ixesha lokuphila kwabo, imfuno yesisombululo esomeleleyo nesinomtsalane sokupakisha iba nkulu. Iibhokisi ze-fry zase-France ezenziwe ngumntu kunye nezenziwe kakuhle zithathwa njengesona sisombululo sisiso esifanelekileyo kwiimveliso ezinjalo njengoko ziphuhliswe ngokukodwa ukuphucula inqanaba lokhuseleko lweemveliso zokutya ezinjengeefry. Badlala indima ebalulekileyo ekutsaleni abathengi kunye nokwandisa ukuthengisa kunye nokusebenza kwabathengisi abachaphazelekayo.
Ukuhanjiswa kweBhokisi yeBhega yokuTya okuKhawulezayo
Iibhokisi zeChunkai zeBhodi eNgcacileyo yeBhokisi kunye neeTreyi ziluhlu olubanzi lweeMveliso eziNdawo eziSingqongileyo (Eco). Sikwabonelela ngokuprinta kwesiko kunye nelogo yakho kuninzi lweemveliso zethu. Ngokukhetha iimveliso zethu ezinokuboliswa ziintsholongwane uthatha inyathelo elikhulu lokuya kwinkonzo yokutya ezinzileyo nokuba uyivenkile yekofu, ivenkile yokuthabatha, ishishini lokutya, irestyu, iofisi okanye iqumrhu elikhulu. Nciphise indawo yakho yekhabhoni ngokukhetha iimveliso zethu.
Iphepha elilahlwayo lePhepha leSobho
I-Bowl ye-Craft Paper Soup Bowl iyindebe elahlwayo eyenziwe ngephepha kwaye ihlala ifakwe okanye ifakwe iplastiki okanye i-wax ukukhusela umbane ekuphumeni okanye ekutyeni kwiphepha. Sinokubonelela ngobungakanani obahlukeneyo ukusuka kwi-4oz ukuya kwiikomityi ezingama-30oz. Sinokwenza ngokwezifiso ukushicilelwa kombala okanye igrama yezinto eziphathekayo. Yintoni enye, sinako ukuyila ukuprintwa kwakho.
Inkunkuma yeCraft Paper Soup Cup
Ikomityi yesuphu yesonka esilahlwayo yindebe elahlwayo eyenziwe ngephepha kwaye ihlala ifakwe okanye ifakwe iplastiki okanye i-wax ukuthintela ulwelo ekuphumeni okanye ekutyibilikeni ephepheni, inokwenziwa ngephepha elirisayikilishwe kwaye lisetyenziswa kakhulu kwihlabathi liphela. Sinokubonelela ngobungakanani obahlukeneyo ukusuka kwi-4oz ukuya kwiikomityi ezingama-30oz. Sinokwenza ngokwezifiso ukushicilelwa kombala okanye igrama yezinto eziphathekayo. Yintoni enye, sinako ukuyila ukuprintwa kwakho.
Umzi mveliso weBhokisi eKrwada yeBrown
Le fektri yeBrown Kraft yeFektri ikhethe izinto ezikumgangatho ophezulu, ubunjani buthambile kwaye buthambile, bugudile kwaye buthambile, sebenza kakuhle, ngakumbi kumabanga. Umsebenzi wobugcisa obugqibeleleyo, unyango lwekona olufezekileyo, oluhle nolomeleleyo. Ubume obugqibeleleyo benza ukuba ibhokisi yesipho ibhalwe ngakumbi.
Umenzi webhokisi yePizza eprintiweyo
Imbonakalo yebhokisi yePizza eshicilelweyo eyi-8 ”intle, umbala ucacile, ipateni inomtsalane, kwaye akukho lula ukuyicima. Indawo e-ethe-ethe kunye egudileyo, ukhetho olucekeceke lwephepha, izinto ezinokuphefumla, kunye noyilo lomngxunya wokufaka umoya liqinisekisa ukuba ipitsa ayonakalisi. Ibhokisi ityebile kakhulu kwaye iqinile, ukutya okuphakathi kwinqanaba lokutya ngesiqinisekiso se-FSC, isempilweni kwaye inobuhlobo kwindalo, enokuhlangabezana nomgangatho we-FDA, okhuselekileyo nongcoliseko-moya. Isakhiwo sokwakha senza kube lula ukuvula nokuvala ngexesha lokuyisebenzisa.
Inkcenkcesheli yebhokisi yeziqhamo zephepha
Le Bhokisi yeziqhamo yeziQinisekiso ezinamaphepha enemigca emithathu eprintiweyo, eqinile kwaye yomelele. Ii-vents ziyilelwe ukwenza imveliso ingathambekiyo ukubola. Ukuprinta ipateni efanelekileyo, ngokuhambelana nomfanekiso wemango, intle kwaye inesisa, yongeza ixabiso lemveliso. Umqheba unengqiqo kuyilo, akukho lula ukwaphula, kwaye awenzakalisi isandla. Ibhokisi ityebe kakhulu kwaye iqinile, izinto zokutya ezikudidi lokutya kunye nesiqinisekiso se-FSC, esempilweni kwaye inobuhlobo kwindalo, enokuhlangabezana nomgangatho we-FDA, okhuselekileyo nongcoliseko -kukhululekile. Isakhiwo sokwakha senza kube lula ukuvula nokuvala ngexesha lokuyisebenzisa.
Idilesi: Hayi. 1150 Xinlin Road, Zhelin Town, District Fengxian, Shanghai, China